DC နဲ့ Batman Fan တွေအတွက် FB မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Batman Coffee ဆိုင်သစ်လေး
4 Oct 2018 . 3:45 PM
ကော်ဖီဆိုင်ထဲ Batman ကြီးရောက်လာပြီဗျို့…သူ့ချည်းပဲလားဆို Joker ပါ အဆစ်ပါသတဲ့…
ဘယ်မှာလဲဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့၊ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမပေါ်၊ အမှတ် (၇၃)၊ ကြည့်မြင်တိုင်ဘူတာနဲ့ ညဈေးမှတ်တိုင်ကြားထဲက လောလောလတ်လတ် ဖွင့်ထားတဲ့ “Cafe Gotham” ဆိုင်လေးမှာနော်။
Batman နဲ့ တခြား Comic Character တွေကို Graphic အကြမ်း၊ အလန်းကြီးတွေနဲ့ နံရံပေါ် Graffiti တွေဆွဲထားတဲ့ ကော်ဖီဆိုင် အသစ်ဆိုမှ အသစ်နော်။
နံရံတစ်ခုလုံး အမှောင်ကမ္ဘာကြီးလို တိမ်နက်တွေ၊လင်းနို့တွေနောက်ခံနဲ့ ကြီးမားခန့်ထည်လွန်းတဲ့ Batman Graffiti ကြီးကတော့ DC Fan တွေ ဆိုင်ထဲကို ဝင်ဝင်ချင်း ရူးခါကြွေကျမယ့် အပြင်အဆင်ကြီး။
အမှန်တော့ ဆိုင်လေးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးရယ်။ ကျဉ်းဆို တိုက်ခန်းမြေညီထပ်တစ်ခန်းစာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ရှင်က ဈေးကွက်စီးပွားရေး မသောင်းကျန်းဘူး။ ခုံတွေ ပြွတ်ညှပ်နေအောင်မထားထားဘူး။ ဆိုဖာခုံအကြီးကြီးရယ်၊ လမ်းမဘက်မျက်နှာစာမူထားတဲ့ စားပွဲခုံတန်းလေးတွေရယ်၊ ဒေါင့်ချိုးဘက်က စားပွဲလေးတွေရယ် ခပ်ရိုးရိုးလေးပဲ။
ကော်ဖီဖျော်တဲ့ Counter ရှေ့နားမှာတော့ ဂရုမစိုက်ခြင်းအနုပညာအပါအဝင် တခြားစာအုပ်လေးတွေပါ စင်လေးသက်သက်လုပ်ပေးထားတော့ အဓိက စာအေးဆေးဖတ်လို့ရအောင်ပါ စီစဉ်ပေးထားတာလေး သဘောကျစရာ။ နောက်ပြီးဆိုင်မှာ သတိထားမိတာက Lighting။ ခပ်မှိန်မှိန် အလင်းရောင်မျိုးလေးကိုမှ လင်းလင်းထင်းထင်း အပြင်ပြတင်းက နေရောင်နဲ့ mix လုပ်ထားတယ်။ အမိုးမြင့်တော့ အသက်ရှုချောင်တယ်။
ရနိုင်တာတွေကတော့ အသောက်တွေချည်း။ အသောက်တွေချည်းဆိုလို့ မူးစရာတစ်ခုမှ မပါတဲ့ အသောက်တွေပါလို့။ Coffee ၊ Smoothie ၊ Frappe ၊ Soda ၊ Fruit Juice နဲ့ တခြား Thai Tea ၊ Latte ၊ Green Tea စုံလို့ စိလို့ရယ်။ အဲ့…ဒါပေမယ့် စားစရာသောက်စရာကတော့ ခုချိန်ထိကို မီနူးဆွဲနေတုန်းမို့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲတမျိုးပဲရသတဲ့။ နောက်တပတ်ဆို အစားအစာမီနူးလည်း ထွက်ပြီတဲ့။
ကိုယ်ကတော့ Batman ကြီးဆွဲဆောင်နေတာနဲ့ ချက်ချင်းထသွားတာ ကော်ရည်တမျိုးပဲရသေးလို့ အဲ့ဒါပဲမှာစားခဲ့ရသည်ပေါ့ကွယ်။
ကော်ရည်လေးနဲ့လိုက်ဖက်တာက အသီးဖျော်ရည်လေးဆိုတော့ Sunkist အသီးဖျော်ရည်ရယ်၊ ဆိုင်ရဲ့ Drinks လက်ရာ Skill သိချင်လို့ မှာလိုက်တာက Greentea Frappe ရယ်။
ကော်ရည် ရဲ့ အသက်က ငါးပိထောင်းလေ။ ဒီ ဆိုင်ကတော့ ဒီတချက်တည်းနဲ့တင် သဘောကျစရာတွေကောင်းသွားပြီ။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ငါးပိထောင်းကို ငါးပိနံ့သင်းသင်း၊ စပ်စပ်လေး။ ပြောရင်းသွားရေတောင်ကျတယ်။
ငါးပိထောင်းခပ်မောက်မောက်လေးကို ကော်ရည်ထဲထည့် သံပုရာသီးညှစ်၊ မွှေပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်စား။ လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံပြီ။ စပ်လာရင် Sunkist ချဉ်ချဉ်လေးသောက်။ အစားကောင်းစားရရင် ကို ဘ၀က သာယာတာ။ Greentea Frappe ကတော့ အဆိမ့်ထက် အချိုလေး နည်းနည်းပိုကဲတယ်။ Matcha Greentea ရဲ့ ခပ်သက်သက်အရသာလေး ပါးပါးပဲပါတယ်။ စိတ်ကျေနပ်မှု သိပ်မရ။
ဈေးနှုန်းလား ၁၅၀၀ က စပါသတဲ့။ ကော်ရည်ကတော့ ၂၀၀၀ ပါတဲ့။ အသောက်အနေနဲ့ ဈေးတော်ပေမယ့် အစားအနေနဲ့တော့ ဈေးကြီးတယ်ဆိုရမယ်။
အရသာတွေတော့ ထွေထွေထူးထူး အဆန်းအပြားမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်ပါပဲနော်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကတော့ ဆန်းတာထက်ကို အထာကျနေတော့ အစားအသောက်ထက် အေးဆေး Chill ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုမိုက်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီဆိုင်က လူပြည့်တိုင်း၊လူများတိုင်း ထိုင်ကောင်းတဲ့ထဲမပါဘူးနော်။ ဒါလေးတော့ သတိပြု။
ဒါပေမယ့် Wifi လည်းရတယ်။ ဖတ်စရာစာအုပ်လည်းရှိတယ်။ကဲ…ဘာလိုသေးလဲပြော?
ဆိုင်ထဲမှာ မထိုင်ချင်လည်း အပြင်မှာ အေးဆေးမြက်ခင်းလေးနဲ့ သာသာယာယာလေးထိုင်လို့ရအောင် ခုံလေးတွေချပေးထားသေး။
အားနည်းချက်ကတော့ တစ်ဆိုင်လုံးမျှေနှောက်ရှာတာတောင် အမှိုက်ပုံးမတွေ့ခဲ့တော့ အမှိုက်တွေ၊ တစ်သျှူးတွေ ဘယ်နားပစ်ရမှန်းကို မသိဘူး။
ဝန်ထမ်းလေးရှိတဲ့လူနည်းနည်းလေးကလည်း ဖော်ရွေနွေးထွေးတော့ အခရာရဲ့ အစားတလိုင်းလေးခမျာ ၃နာရီလောက်ကြာကြာထိုင်ခဲ့တာတောင် အရမ်းသဘောကောင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
၁၄ ရက်နေ့ထိကို ဆိုင်မှာဘာစားစား ၁၀% လျှော့ပေးတယ်တဲ့။ ဪ..အဲ့ပြင် Gotham Series ကိုလည်း Series လိုက်လက်ဆောင်ကူးပေးတယ်ဆိုတော့ကာ…..
ကဲ…DC Fan တို့၊ Batman Fan တို့ရေ လာမယ်ဆို Harddisk လေးပါသယ်ပြီး မနှေးမမြန် တခေါက်လောက်လာကြည့်ဖို့ ဒီဆိုင်လေးကို အလင်းပြပါရစေလို့…
မနက် ၁၀ ကနေ ည ၁၀ နာရီထိဖွင့်တယ်နော်။ “Cafe Gotham ” တဲ့နော်။
DC နဲ့ Batman Fan တှအေတှကျ FB မှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ Batman Coffee ဆိုငျသဈလေး
ကျောဖီဆိုငျထဲ Batman ကွီးရောကျလာပွီဗြို့…သူ့ခညျြးပဲလားဆို Joker ပါ အဆဈပါသတဲ့…
ဘယျမှာလဲဆိုရငျတော့ ရနျကုနျမွို့၊ကွညျ့မွငျတိုငျလမျးမပျေါ၊ အမှတျ (၇၃)၊ ကွညျ့မွငျတိုငျဘူတာနဲ့ ညဈေးမှတျတိုငျကွားထဲက လောလောလတျလတျ ဖှငျ့ထားတဲ့ “Cafe Gotham” ဆိုငျလေးမှာနျော။
Batman နဲ့ တခွား Comic Character တှကေို Graphic အကွမျး၊ အလနျးကွီးတှနေဲ့ နံရံပျေါ Graffiti တှဆှေဲထားတဲ့ ကျောဖီဆိုငျ အသဈဆိုမှ အသဈနျော။
နံရံတဈခုလုံး အမှောငျကမ်ဘာကွီးလို တိမျနကျတှေ၊လငျးနို့တှနေောကျခံနဲ့ ကွီးမားခနျ့ထညျလှနျးတဲ့ Batman Graffiti ကွီးကတော့ DC Fan တှေ ဆိုငျထဲကို ဝငျဝငျခငျြး ရူးခါကွှကေမြယျ့ အပွငျအဆငျကွီး။
အမှနျတော့ ဆိုငျလေးက ကဉျြးကဉျြးလေးရယျ။ ကဉျြးဆို တိုကျခနျးမွညေီထပျတဈခနျးစာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ဆိုငျရှငျက ဈေးကှကျစီးပှားရေး မသောငျးကနျြးဘူး။ ခုံတှေ ပွှတျညှပျနအေောငျမထားထားဘူး။ ဆိုဖာခုံအကွီးကွီးရယျ၊ လမျးမဘကျမကျြနှာစာမူထားတဲ့ စားပှဲခုံတနျးလေးတှရေယျ၊ ဒေါငျ့ခြိုးဘကျက စားပှဲလေးတှရေယျ ခပျရိုးရိုးလေးပဲ။
ကျောဖီဖြျောတဲ့ Counter ရှနေ့ားမှာတော့ ဂရုမစိုကျခွငျးအနုပညာအပါအဝငျ တခွားစာအုပျလေးတှပေါ စငျလေးသကျသကျလုပျပေးထားတော့ အဓိက စာအေးဆေးဖတျလို့ရအောငျပါ စီစဉျပေးထားတာလေး သဘောကစြရာ။ နောကျပွီးဆိုငျမှာ သတိထားမိတာက Lighting။ ခပျမှိနျမှိနျ အလငျးရောငျမြိုးလေးကိုမှ လငျးလငျးထငျးထငျး အပွငျပွတငျးက နရေောငျနဲ့ mix လုပျထားတယျ။ အမိုးမွငျ့တော့ အသကျရှုခြောငျတယျ။
ရနိုငျတာတှကေတော့ အသောကျတှခေညျြး။ အသောကျတှခေညျြးဆိုလို့ မူးစရာတဈခုမှ မပါတဲ့ အသောကျတှပေါလို့။ Coffee ၊ Smoothie ၊ Frappe ၊ Soda ၊ Fruit Juice နဲ့ တခွား Thai Tea ၊ Latte ၊ Green Tea စုံလို့ စိလို့ရယျ။ အဲ့…ဒါပမေယျ့ စားစရာသောကျစရာကတော့ ခုခြိနျထိကို မီနူးဆှဲနတေုနျးမို့ ကျောရညျခေါကျဆှဲတမြိုးပဲရသတဲ့။ နောကျတပတျဆို အစားအစာမီနူးလညျး ထှကျပွီတဲ့။
ကိုယျကတော့ Batman ကွီးဆှဲဆောငျနတောနဲ့ ခကျြခငျြးထသှားတာ ကျောရညျတမြိုးပဲရသေးလို့ အဲ့ဒါပဲမှာစားခဲ့ရသညျပေါ့ကှယျ။
ကျောရညျလေးနဲ့လိုကျဖကျတာက အသီးဖြျောရညျလေးဆိုတော့ Sunkist အသီးဖြျောရညျရယျ၊ ဆိုငျရဲ့ Drinks လကျရာ Skill သိခငျြလို့ မှာလိုကျတာက Greentea Frappe ရယျ။
ကျောရညျ ရဲ့ အသကျက ငါးပိထောငျးလေ။ ဒီ ဆိုငျကတော့ ဒီတခကျြတညျးနဲ့တငျ သဘောကစြရာတှကေောငျးသှားပွီ။ တျောတျောကောငျးတဲ့ငါးပိထောငျးကို ငါးပိနံ့သငျးသငျး၊ စပျစပျလေး။ ပွောရငျးသှားရတေောငျကတြယျ။
ငါးပိထောငျးခပျမောကျမောကျလေးကို ကျောရညျထဲထညျ့ သံပုရာသီးညှဈ၊ မှပွေီး ပါးစပျထဲထညျ့စား။ လုံးဝ ပွီးပွညျ့စုံပွီ။ စပျလာရငျ Sunkist ခဉျြခဉျြလေးသောကျ။ အစားကောငျးစားရရငျ ကို ဘဝက သာယာတာ။ Greentea Frappe ကတော့ အဆိမျ့ထကျ အခြိုလေး နညျးနညျးပိုကဲတယျ။ Matcha Greentea ရဲ့ ခပျသကျသကျအရသာလေး ပါးပါးပဲပါတယျ။ စိတျကနြေပျမှု သိပျမရ။
ဈေးနှုနျးလား ၁၅၀၀ က စပါသတဲ့။ ကျောရညျကတော့ ၂၀၀၀ ပါတဲ့။ အသောကျအနနေဲ့ ဈေးတျောပမေယျ့ အစားအနနေဲ့တော့ ဈေးကွီးတယျဆိုရမယျ။
အရသာတှတေော့ ထှထှေထေူးထူး အဆနျးအပွားမဟုတျပါဘူး။ ပုံမှနျပါပဲနျော။ ဆိုငျအပွငျအဆငျကတော့ ဆနျးတာထကျကို အထာကနြတေော့ အစားအသောကျထကျ အေးဆေး Chill ခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ပိုမိုကျမယျ။ ပွီးတော့ ဒီဆိုငျက လူပွညျ့တိုငျး၊လူမြားတိုငျး ထိုငျကောငျးတဲ့ထဲမပါဘူးနျော။ ဒါလေးတော့ သတိပွု။
ဒါပမေယျ့ Wifi လညျးရတယျ။ ဖတျစရာစာအုပျလညျးရှိတယျ။ကဲ…ဘာလိုသေးလဲပွော?
ဆိုငျထဲမှာ မထိုငျခငျြလညျး အပွငျမှာ အေးဆေးမွကျခငျးလေးနဲ့ သာသာယာယာလေးထိုငျလို့ရအောငျ ခုံလေးတှခေပြေးထားသေး။
အားနညျးခကျြကတော့ တဈဆိုငျလုံးမြှနှေောကျရှာတာတောငျ အမှိုကျပုံးမတှခေဲ့တော့ အမှိုကျတှေ၊ တဈသြှူးတှေ ဘယျနားပဈရမှနျးကို မသိဘူး။
ဝနျထမျးလေးရှိတဲ့လူနညျးနညျးလေးကလညျး ဖျောရှနှေေးထှေးတော့ အခရာရဲ့ အစားတလိုငျးလေးခမြာ ၃နာရီလောကျကွာကွာထိုငျခဲ့တာတောငျ အရမျးသဘောကောငျးခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။
၁၄ ရကျနထေိ့ကို ဆိုငျမှာဘာစားစား ၁၀% လြှော့ပေးတယျတဲ့။ ဪ..အဲ့ပွငျ Gotham Series ကိုလညျး Series လိုကျလကျဆောငျကူးပေးတယျဆိုတော့ကာ…..
ကဲ…DC Fan တို့၊ Batman Fan တို့ရေ လာမယျဆို Harddisk လေးပါသယျပွီး မနှေးမမွနျ တခေါကျလောကျလာကွညျ့ဖို့ ဒီဆိုငျလေးကို အလငျးပွပါရစလေို့…
မနကျ ၁၀ ကနေ ည ၁၀ နာရီထိဖှငျ့တယျနျော။ “Cafe Gotham ” တဲ့နျော။